Typeform: Tụgharịa mkpokọta data n'ime ahụmịhe mmadụ | Martech Zone
A afọ ole na ole gara aga, m dechara a nnyocha e mere online na ọ bụ n'ezie bụghị a ọrụ… ọ mara na mfe. Elere m onye na-eweta ya anya wee Ụdị ụdị. Typeform bịara n'ihi na ndị guzobere chọrọ ịgbanwe ụzọ ndị mmadụ si aza ajụjụ na ntanetị site n'ime ka usoro ahụ bụrụ mmadụ na itinyekwu aka. Ọ rụkwara ọrụ.
Ka anyị che ya ihu… anyị kụrụ ụdị na ntanetị yana ọ bụ ahụmịhe jọgburu onwe ya. Nkwenye na-abụkarị ihe ndị a na-eme mgbe ọ bụla a gụsịrị akwụkwọ na-esiri ike ịgụ. A na-agbaji ụdị ahụmịhe niile.
Typeform agbanweela nnakọta data na ntanetị ma ọ na-aga n'ihu na mma. Typeform na-eji nkwupụta na-aga n'ihu, a usoro ebe onye ọrụ na-na-nyere na mmekọrịta nke ha chọrọ… bụghị ihe karịrị niile nke ọcha. Usoro a na njirimara onye ọrụ na njirimara nke onye ọrụ maara nke ọma na ọ bụ ụzọ dị egwu iji mepụta ahụmịhe ka elu.
Uru nke ụdị ọdịdị
Njikọ aka Ka Mma - completiondị nhazi ọkwa nke Typeform dị 72% dị elu karịa nke ụdị nkịtị.
Ahụmahụ Kacha Mma - Typeform awade full customization ike na-ekwe ka ụdị na-apụta. Dị nwere ike ahaziri iche na omenala dị iche iche, ọtụtụ nhọrọ nhazi, GIF, vidiyo, na ndị ọzọ.
Data ka mma - N'adịghị ka ụdị oge niile, ụdị ọdịdị dị iche iche na-ewepụta otu ajụjụ n'otu oge. Nke a na-ebelata cognitive ibu, na-eme gị zaa lekwasịrị anya, na-ebelata ụdị ike ọgwụgwụ.
Na Typeform, ị nwere ike ịmepụta ụdị mmekọrịta, nyocha, na ajụjụ ndị na-eme ka ahụmịhe nke ịnakọta ozi obere mmadụ. Nke a bụ nnukwu vidiyo dị mkpa banyere ụdị ụdị - iji mkpụrụ edemede, agba, eserese, eserese, na iche.
Etu esi eme ka ụdị ihe eji arụ ọrụ maka akara gị
Nchịkọta data dị oke mkpa nye ndị ahịa na ọrịre ahịa ọ bụla iji mee ka anyị nwee ike ịkparịta ụka nke ọma maka mkpa ha na ịtọ atụmanya. lee ụzọ isii ụlọ ọrụ na-eji Typeform:
Nnyocha na nchọpụta - mepụta nyocha ahịa, nyocha nke ndị ahịa, yana akwụkwọ nyocha iji mata ihe ndị mmadụ chere n'ezie ka ị nwee ike ịme amamịghe.
Nweta ma Too - mepụta njirisi mmadụ na-edu ndú, ndị na-ekwu okwu, na ụdị ntinye aka. Gbanwee mmekorita ya na ndu ma too obodo gi.
Hazie ma Mee Atụmatụ - Typeform -enyere gị aka ịnakọta ma hazie isi ozi maka ọzụzụ sessions, otu nri ehihie, ụlọ ọrụ mgbaba… ma ọ bụ ihe ọ bụla merenụ ị na-ahazi.
Tinye aka ma jigide - mepụta mmekorita ajuju ajuju (FAQ) ma ọ bụ ebe nchekwa na-akpaghị aka na Typeform. Nwere ike ijikọ ya na ngwa nkwado ndị ahịa gị.
Zụọ ma kuziere - chefuo vidiyo na-agwụ ike site na ntuziaka na-aga otu ntị ma pụọ ​​na nke ọzọ. Na Typeform, ị nwere ike ịmepụta itinye aka, nyocha mmekọrịta iji nyere aka zụọ ndị ọrụ, nyochaa ndị na-aga ime, ma ọ bụ kụziere ndị ahịa banyere ngwaahịa gị.
Mụta ma Meziwanye - jiri ụdị nyocha nke enyi na-anakọta data afọ ojuju ndị ahịa, nzaghachi ngwaahịa, na nyocha ihe omume na-esote iji nyere aka nakọta nzaghachi site na atụmanya gị na ndị ahịa gị.
Mụtakwuo Debanye aha maka Typeform
Typeform rationsdị Integrations
Ụdị ụdị nwere ndepụta dị egwu nke njikọta ngwaahịa, gụnyere nchịkọta, ịkọ akụkọ, nkwado, mmekorita, akwụkwọ, email ahịa, njikwa faịlụ, IT & injinia, ọgbọ na-eduga, ịzụ ahịa ahịa, ịkwụ ụgwọ nhazi, nrụpụta, nyocha, ahụmịhe ndị ahịa, ụgwọ ọrụ, ahịa ikike, na njikọta njikwa mmekọrịta ndị ahịa.
Lelee ụdị ụdị nhazi niile
Ngosi: Abụ m mmekọ maka Ụdị ụdị
Tags: ụdị nnwetaụdị nzaghachi ndị ahịanjikọ akaetinye ụdịụdị ndebanye ahaụdị nhaziụdị ahụmahụụdị ikpo okwuihe oyiyimgbaghaụdị nyocha ahịanyochaụdị nzaghachi ngwaahịankwupụta na-aga n'ihumgbasa ozi bara ụbamafere mgbaghandenye aha iche-ichennyocha e mereụdị ọzụzụụdị ụdịụdị ọdịdịahụmahụ onye ọrụonye ọrụ interface